Caddaanku wuxuu ina tusayaa muxuu ahaa Adobe Photoshop 1.0 | Abuurista khadka tooska ah
Terry Caddaan waxay u dabaaldegeysaa sanad-guuradii 25-aad ee Photoshop oo leh a Photoshop 1.0 demo si ay noogu bartaan fiidiyoow YouTube ah muxuu ahaa qaabkeedi uhoreeyay iyo wuxuu noqday 25 sano kadib.
Haddii aan dib ugu noqonno noocaas, maanta xarunta ayaa sameynta qaababka lakabka ama isku darka waa wax aan u baranay anaga oo aan si dhib leh u ogaan isbeddelada la keenay sanadaha. Marka laga reebo waxyaalaha kale ee xiisaha leh ee aan ka heli karno fiidiyowga ee Photoshop uu muujinayo waa sida uu White uga hadlayo waxa uu ahaa diskiga diskiga, menusyada shaandhada ama nidaamka laftiisa, isaga oo xisaab ka bixinaya dhammaan sannadihii ina soo maray tan iyo markaas.
Markii la gaaro 1990 waxaa horey u jiray qalab dib loogu hagaajiyo sawirrada: Quantel Paintbox (oo loo adeegsaday filimka Jurassic Park), Hell Chromacom ama Xcitex oo lahaa astaamo ka fiican kan Photoshop laakiin waxay ku kacayaan $ 500 ama xitaa ka badan. Waxyaabaha ku dhacay Photoshop ee ku saabsan Mac waa inay u keentay adduunka oo dhan dib-u-hagaajin dijitaal ah, sidaa darteed sida ay caan u noqotay.
Sidoo kale waa wax lala yaabo maadaama aaladaha ugu muhiimsan wali ay nalajiraan sida cloning ama usha sixirka, inkasta oo ay haa tahay, waxay u xuubsiibteen ku filnaansho inay ka fogaadaan wixii ay ku jireen nooca 1.0. Qalabkan isku midka ah wuxuu ahaa mid ka mid ah astaamaha lagu kala garto barnaamijyada kale ee markii dambe soo muuqday.
Marka laga reebo waxa dad badani siin lahaayeen inay leeyihiin lakabyada in maanta ay yihiin wax caadi ah maalinba maalinta ka dambaysa oo leh Photoshop. Fiidiyow, mahadsanid Caddaan, wuxuu muujinayaa awoodaha Adobe Photoshop version 1.0 ay laheyd waqtigeeda, barnaamij wax ka beddelay dib-u-hagaajinta dijitaalka iyo farsamaynta sawirrada taasina waxay si tartiib tartiib ah ugu soo korodhay waxa maanta jira Cloud Cloud Iyo waxa wali inagu waajib ah inaan aragno!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Muxuu ahaa Adobe Photoshop 1.0